HOTBED "DAYAS": DABEECAD BUUXDA - DHISMAYAASHA
Hotbed "Dayas" - ilaalinta ugu fiican ee geedo
Milkiilaha kasta ee aqal-kireeye ama guryo xowli ah ayaa si dhakhso ah ama dambe uga fikiraya ubaxyada ama khudaarta sii kordhaya ee dhulkeeda. Greenhouses waxay ka caawisaa inay ogaadaan fikraddan. By abuuro abuurka dalagyada kala duwan ee lagu koriyo, waxaad ka heli kartaa geedo tayo sare leh oo leh, oo leh daryeel ku habboon, hubiyaan beergooyska wanaagsan ama siin fursad ay ku raaxaystaan ​​beerta ubax ah oo aad u badan ubax dhan xagaaga iyo xilliga dayrta.
Inta badan bannaanka u khibrad badan ayaa jecel barafyada fudud. Qofna ma doonayo in uu ku foorarsado dhismaha aqalka weyn ee lagu koriyo. Waxay qaadataa waqti badan iyo natiijooyin kharash badan oo dhaqaale. Intaa waxaa dheer, tiro badan oo geedo ah loogama baahna milkiilaha caadiga ah ee dacha.
Doorasho weyn - Mega kululeey "Dayas"oo lagu iibiyo dukaamo khaas ah. Waxaa lagu samayn karaa gacmahaaga, laakiin qaybta warshadu waxay badanaa ka sahlan tahay isticmaalka.
On sale waxaad ka heli kartaa version dheer oo ah "Dayas" iyo mini-aqalka dhirta lagu koriyo oo isku mid ah. Laakiin mabda'a isticmaalka ikhtiyaaraadka labadaba waa isku mid. Xirmada waxaa ka mid ah lugaha, xayndaabyada, daboolida waxyaallaha iyo qoryaha gaarka ah ee ku dhejiya arsiyada. Xaddiga xirmooyinka - 0.65 ilaa 1.1 iyo 0.07 mitir, miisaanka - 2 kg gudaha. Iibsigu waa mid aad u wanaagsan ku habboon gaadiidka meesha saxda ah: waxay ku haboontahay jirida gaari kasta.
Ka dib markii aad iibsaneysid, xarunta si deg deg ah ayaa loo rakibi karaa. Ha iibsan qaybo dheeraad ah. Dhammaan xarumaha iyo xarigyada ayaa horey loo siiyay oo mar hore lagu daray.
Nooca kale ayaa jira mudnaanta. Waxaa ka mid ah soo socda:
miisaan fudud iyo isafgarad;
isticmaalka habboon ee ficilka: markaad dhirbaaxayso iyo waraabinta dhirta;
filimka ayaa lagu taagay heerkii la rabay ee furitaanka albaabka;
Awoodda qaab-dhismeedku waa sida si sahal ah loogu wareejiyo gusaska dabaysha;
aqalka dhirta lagu koriyo waa sahlan tahay in laga guuro meel ilaa meel, haddii loo baahdo;
Nafaqada - haddii aad isticmaasho alaab tayo sare leh, aqalka dhirta lagu koriyo wuxuu socon doonaa dhowr xilli oo isku xiga.
Caawin Ilaa hadda, tiyaatarka "Reifenhauzer 50" waxaa inta badan loo isticmaalaa alaabo daboolan. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad si weyn u kordhiso nolosha "Dayas" oo kaydisa lacag.
Tuubooyinka 20-mm ee qashinka ah waxay u dhaqmaan qaab ahaan qaabka. Xirmada waxaa sidoo kale ku jira dhejis iyo caagado caag ah, halkaas oo saldhigyada tuubbooyinka la geliyo.
Haddii "Dayas" loo dhiso ninkii beerta ka shaqeynayay, filimka caadiga ah wuxuu ku habboon yahay dhismihiisa. Goobaha dhamaystiran ee wax soosaarka warshadaha, waxyaabaha caadiga ah ee kor ku xusan "Reifenhauzer 50" caadi ahaan waa la joogaa. Fiber tani waxay u eg tahay suuf. Waa la qaadi karaa wakhti kasta si ay u daadiyaan geedo, hawo u gasho ama siiso fursad ay ku soo galaan qorraxda. Sewn canvas si fudud ayaa u dhaqaaqa weheliya kabaha, kumbyadu waxay gacan ka geystaan ​​sidii loo xakamayn lahaa heerka kor u qaadista.
Sidoo kale boggayaga waxaa ku yaal maqaalo dheeraad ah oo ku saabsan noocyada lagu koriyo: Iskuday, Innovator, Pickle, Snail, Breadbasket iyo dhaqamada kale.
Dhismaha dhismaha waxaad kori kartaa saladh hore, radishes, geedo kaabajka, qajaarka, yaanyada. Inta badan ee bannaanka u hoyaad ah sida dhalidda miraha. Tani waxay dhacdaa ka dib markaad dhulka ku beerato si loo hagaajiyo biqilka.
Waa muhiim! Badanaana waa lagu koriyo gudaha lagu koriyo, si loo hagaajiyo microclimate ee sariiraha, halkaas oo ay koraan gaar ahaan kulaylka-jecel ama dalagyada qoyaanka-jecel.
Si aad u rakibto "Dayas" dakhliga dacha, muhiim ma aha in la dhiso xarun gooni ah. Algorithm qalabka dejinta waa mid aad u fudud:
Dhulka dhulka masaafada saxda ah ee tuubooyinka caagga ah
Ka dibna, daboolaya alaabta daboolka. Intii lagu guda jiri lahaa gundhiga, duufaan ayaa la geliyaa.
Naqshadeynta waa la adkeeyaa waana la geliyaa lugaha go'an.
Greenhouse "Dayas" ayaa si taxadar leh u ilaalisa geedo. Wuxuu u abuuraa iyada mikroclimate wanaagsan, wuxuu ka ilaaliyaa dhirta roobka iyo dabaysha. Yoobashada ee aqalka dhirta isweydaarsanaya si dhaqso ah ayey u habeeyaan oo u koraan. Nadiifiye kastaa wuxuu hubin karaa inuusan shaqadiisa waxba ka dhicin, wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad hesho dalag wanaagsan oo aan loo baahnayn dhibaato.
Sawirada aqalka dhirta "Dayas" waxaa lagu soo bandhigay hoos: